Villa Maremosso igumbi Blue - I-Airbnb
Villa Maremosso igumbi Blue
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguGaetano
I-B&B Maremosso iseSan Leone, isithili kunye nolwandle oluphambili lwesixeko saseAgrigento. Yimizuzu emi-5 ukusuka kwiNtlambo yeeTempile, iimitha ezili-100 ukusuka elwandle. I-Bed and Breakfast ibekwe ngaphakathi kwi-villa ejikelezwe buhlaza, ngoko ke unokonwabela iindawo ezingaphandle kunye negadi emangalisayo.
4.75 (iingxelo zokuhlola 16)
I-Maremosso yimizuzu emi-5 ukusuka kwiNtlambo yeeTempile, i-100 yeemitha ukusuka elwandle kunye namanyathelo ambalwa ukusuka kwi-Falcone Borsellino yolwandle. Kummandla okufutshane ke uya kufumana iindawo zokutyela ezininzi, iiklabhu, ii-pubs, iipizza, ii-ice cream parlors, kunye nevenkile enkulu, i-cubacconist kunye ne-shuttle stop ye-Valley of the Temples kunye nombindi wesixeko esiyimbali.
Sise: 100 m ukusuka elwandle imizuzu emi-5 ukusuka kwiNtlambo yeeTempile kunye neziko lembali ye-Agrigento Shuttle yokumisa kwiNtlambo yeeTempile kunye neziko leembali zesixeko phantsi kwendlu 5 imizuzu ukusuka kwindawo yokuzalwa kaLuigi Pirandello ( Luigi Pirandello House Museum) imizuzu eli-15 ukusuka Scala Dei Turchi (UNESCO) imizuzu engama-20 ukusuka loovimba engundoqo uhlobo (Torre Salsa, Eracea, Bovo Marina)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Villaggio Mosè